လီဗာပူးမှာ လျှင်မြန်စွာ အထိုင်ကျပြီး ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ လူး၀စ်ဒီယက်ကို သတိပေးသွားခဲ့တဲ့ ပေါလ်မာဆွန် - xyznews.co
လီဗာပူးမှာ လျှင်မြန်စွာ အထိုင်ကျပြီး ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ လူး၀စ်ဒီယက်ကို သတိပေးသွားခဲ့တဲ့ ပေါလ်မာဆွန်
အာဆင်နယ်နဲ့ အင်္ဂလန် တိုက်စစ်မှုးဟောင်း ဖြစ်သူ ပေါလ်မာဆွန်က လီဗာပူး ကစားသမားသစ် လူး၀စ်ဒီယက်ဟာ လက်ရှိ အချိန်မှာ ပရီးမီးယားလိဂ် ခံစစ်တွေရဲ့ လူကပ်ကစားခြင်းကို ခံရမယ့် ကစားသမား ဖြစ်လာခဲ့ပြီလို့ သတိပေးသွားခဲ့ ပါတယ်။ မာဆွန်က ဒီယက်ဟာ လီဗာပူးမှာ လျှင်မြန်စွာ အထိုင်ကျကာ ခြေစွမ်းပြကစားလျက် ရှိနေတာကြောင့် ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေဟာ သူ့ကို ရပ်တန့်ဖို့ အတွက် အစီအစဉ်တွေကို ရေးဆွဲပြီးလောက်ပြီး ဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်နေပါတယ်။
ကိုလံဘီယာ စတားဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီက ပေါ်တိုမှ လီဗာပူးကို ကနဦး ပေါင် ၃၇ သန်းနဲ့ ပြောင်းလာခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အန်ဖီးကလပ် အတွက် ၇ ပွဲမှာ ၁ ဂိုးသွင်းပေးထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီယက်ဟာ လီဗာပူးကို ရောက်လာပြီးနောက် ကာရာဘောင်ဖလားကို ရရှိအောင် ကူညီပေးခဲ့သလို မန်စီးတီးနဲ့ ရမှတ်ကွာဟမှု လျော့ကျသွားအောင်လည်း ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။
မာဆွန်က အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် ကစားသမား အတွက် တကယ့် စိန်ခေါ်မှုက အခုမှ စတာလို့ ဆိုလိုက်ပြီး မာဆေးဆိုက် ကလပ်ဟာ လက်ကျန် ဖလား ၃ လုံးအတွက် တိုက်ပွဲ၀င်လျက် ရှိနေပါတယ်။
မာဆွန်က “လူး၀စ်ဒီယက်ဟာ လီဗာပူးကို ရောက်လာခဲ့ပြီးကတည်းက အကောင်းဆုံး လုပ်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း သူဟာ အခုချိန်မှာ လူကပ် ကစားခံရမယ့်သူ ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ သူဟာ လီဗာပူးကို ရောက်လာပြီးနောက် အားလုံးကို မျက်စိကျစေခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ကစားပုံကို သိပ်ပြီး မမြင်ဖူးခဲ့တဲ့ နောက်ခံလူတွေ သူ့ရဲ့ အကြောင်းကို သိပ်ပြီး မသိတဲ့ နောက်ခံလူတွေကို သူဟာ အံ့အားသင့်စေခဲ့ ပါတယ်။
ရုတ်တရက်ဆိုသလို သူဟာ အခုချိန်မှာ အားလုံးရဲ့ ရေဒါထဲကို ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ ဒီလို အချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ တကယ့် အရည်အသွေးကို ချပြသွားရမှာပါ။ သူဟာ အခုချိန်မှာ ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေရဲ့ team talks မှာ ပါ၀င်နေမှာပါ။ အသင်းတွေဟာ လီဗာပူးကို ရင်ဆိုင်သွားရမယ့် ဗျူဟာ အကြောင်းကို ဆွေးနွေးတဲ့ အခါမှာ မိုဆာလား ဆာဒီယိုမာနေး နဲ့ ဂျိုတာ တို့ကို ရပ်တန့်သွားဖို့ အကြောင်းတင် မကတော့ပါဘူး။ အခုဆိုရင် သူတို့ဟာ လူး၀စ်ဒီယက်ကို ဘယ်လို ရပ်တန့်သွားမလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းပါ ပါနေပါပြီ။
ဒါ့ကြောင့် အခုချိန်ကနေ စပြီး သူ့အတွက် ခြားနားတဲ့ game ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒီအချိန်ကနေ စပြီး သူ့ရဲ့ တကယ့် အရည်အသွေးကို မြင်တွေ့ရတော့မှာပါ။ ထိပ်တန်း ကစားသမားတွေဟာ ဒါကို ကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်။ သူဟာ လူကပ်ကစားခံရမယ့်သူ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော် သူ့ကို ကြောက်အောင် ခြောက်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေဟာ သူ့ကို ရပ်တန့်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို ရှာဖွေသွားပါလိမ့်မယ်။
လက်ရှိ ကျွန်တော် မြင်တွေ့ထားသမျှ အရကတော့ သူ့ရဲ့ ခြေစွမ်းကို တကယ် သဘောကျမိပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဘောလုံးထိချက် ရွေ့လျားမှု အသင်းလိုက် ကစားပုံ လုပ်အား နဲ့ အဆုံးသတ်စွမ်းရည်တွေဟာ တကယ့်ကို ထူးချွန်လှပါတယ်။ သူဟာ လက်ရှိနဲ့ ရာသီကုန်ကြားမှာ လီဗာပူးအတွက် အတော့်ကို အရေးပါတဲ့သူ ဖြစ်လာတော့မှာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကစားသမား အားလုံး အကောင်းဆုံး ပုံစံမှာ မရှိရင် လီဗာပူး အနေနဲ့ ဖလား ၄ လုံး အိမ်မက်ကို မျှော်လင့်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
သူတို့ဟာ ဖလားလေးလုံး ဆွတ်ခူးနိုင်တဲ့ လူစာရင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားသလား? မဟုတ်လောက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ ဒီအတွက် တိုက်ပွဲ၀င်သွားမှာပါ။ ဒီယက်ဟာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု အနေနဲ့ ပါ၀င်သွားရမှာပါ။ လီဗာပူးရဲ့ ကစားသမား တစ်ချို့ဟာ ပွဲတွေ အများအပြား ကစားထားခဲ့ရပြီး ချဲလ်ဆီးနဲ့ ကာရာဘောင်ဖလားမှာလည်း ပင်နယ်တီထိ ကစားခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ လက်ကျန်ပြိုင်ပွဲ ၃ ခု အတွက် လုံလောက်တဲ့ လူအင်အားတော့ ရှိနေပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဒီအချိန်မှာ flying ဖြစ်နေသလို ပါပဲ။” လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
Previous Article Paul Merson လာပါပြီ . . .ဂိုးပြတ်နိုင်မယ့် မန်စီးတီး အပါအဝင် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၂၈ အတွက် ခန့်မှန်းချက်များ
Next Article ချန်ပီယံလိဂ် ရဲ့ ပုံစံသစ် ၊ ချဲလ်ဆီးပိုင်ရှင်သစ် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ တူရကီသူဌေးကြီး ၊ နွေရာသီအတွက် ပြင်ဆင် ဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ